iMyanmarHouse.com မှ အောက်ပါရာထူးများအတွက် အမြန်လိုအပ်သည် | iMyanmarHouse.com
အရှိန်​အဟုန်​ဖြင့်​ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​​နေ​သော မြန်​မာနိုင်​ငံ အိမ်​ခြံ​မြေ​လောက၏ နံပါတ်​တစ်​ဖြစ်​သည့်​ iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း) မှ အောက်ပါရာထူးများအတွက် အမြန်လိုအပ်သည်
လျှင်​မြန်​စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​​နေ​သော ကျွန်​​တော်​/ကျွန်​မတို့၏ Companyနှင့်​အတူ သင်​၏အနာဂတ်​ကိုလည်း ​ကောင်းမွန်​​စေရန်​အတွက်​ iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း)တွင်​ ယ​နေ့ပင်​လျှင်​ အလုပ်​​လျှောက်​ထားလိုက်​ပါ။ (အခြားကုမ္ပဏီများထက် လစာပိုကောင်းသည်)
လျှောက်ထားလိုသူကိုယ်တိုင် အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသာပတေး နေ့များတွင်နေ့လည် (၁) နာရီ အင်တာဗျူး လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက Resume ကို imyanmar.hr.department@gmail.com သို့ ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ (လိုအပ်သောအရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက အီးမေးလ်ပြန်လည်ပို့ကာ Skype / Viber မှတစ်ဆင့် အင်တာဗျူးမည် ဖြစ်ပါသည်။)
Sales Manager ကျား/မ (၁) ဦး
အနည်းဆုံး လုပ်သက် ၃နှစ် ရှိရမည်။
Online လုပ်ငန်း/ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း/ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့ အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင် အတွေ့အကြုံ ရှိဖူးသူကိုဦးစားပေးမည်။ (စင်္ကာပူ၊ အမေရိကား၊ သြစတေးလျ နိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်လိုသူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေး)
အိမ်ခြံမြေ ဥပဒေ ပညာရှင် ကျား/မ (၃) ဦး
အိမ်ခြံမြေနှင့် ပတ်သက်သည့် စာချုပ်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးခြင်း။
ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း။
Customer များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တင်ပြလွှာများ၊ ဥပဒေစာချုပ်စာတမ်းများကို တာဝန်ယူစစ်ဆေးအတည်ပြုပေးခြင်း။
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်ချုပ်ပေးခြင်း။
အိမ်ခြံမြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်များကို တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
အိမ်ခြံမြေစာချုပ်စာတမ်းပိုင်းနှင့် စည်ပင် အိုးအိမ် မြေယာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အိမ်ခြံမြေဥပဒေရေးရာများ၊ စာချုပ်စာတမ်းဥပဒေရေးရာများ၊ ကုမ္ပဏီဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ ‌ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Proven experience as an IT/Project Manager or similar leadership role
Overseas job experience isaplus
Website Developer ကျား/မ (၅)ဦး
မိမိလုပ်ခဲ့ဖူးသော Website များ တပါတည်း ယူလာပြရမည်။
Android / iOS Application Developer ကျား/မ (၅)ဦး
Android (သို့) iOS application development ကျွမ်းကျင်
Native application ကို Java (သို့) Objective C သုံး၍ ရေးနိုင်ရမည်။
English Translator ကျား/မ (၃)ဦး
English မှ Myanmar
Myanmar မှ English
သို့ ကျွမ်းကျင်စွာဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ရမည် (အရေးအသားကိုဦးစားပေး)
Computer, Internet, Email ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Marketing Staff နှင့် Sale Staff position များအတွက်
Skill ကျွမ်းကျင် ကျင်လည်မူများတိုးတက်မည်။
Marketing Staff မ (၁၀)ဦး
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး (သို့) အဝေးသင်တက်နေသူ ဦးစားပေးမည်။
အတွေ့အကြုံမလို (ရုံးတွင် Training ပေးမည်)
Content Creator မ (၃)ဦး
ကွန်ပျူတာ (Excel နှင့် Word) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Internet နှင့် Email သုံးတတ်ရမည်။
English အရေးအဖတ် တော်သူ ဦးစားပေးမည်။
Online / Social Media ပိုင်းတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။
အဝေးသင် ကျောင်းသား/သူ ဦးစားပေးမည်။
စာစီစာရိုက် မ (၃)ဦး
InDesign/ Pagemaker သုံးတတ်ရမည်။
သတင်းထောက် ကျား/မ (၃)ဦး
သတင်းထောက်အတွေ့ အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
အင်တာဗျူး စီစဉ်တင်ဆက်သူ မ (၃)ဦး
အသက် ၃၀ နှစ်ထက်မကြီးရ
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို အင်တာဗျူးနိုင်ရမည်။
ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်း၍ စကားပြောချိုသာ သွက်လက်ရမည်။
Driver ကျား (၁) ဦး
အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း နေသူဦးစားပေးမည်။
နေ့ ညမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Accountant မ (၁)ဦး
LCCI Level3အောင်မြင်ပြီး B.com, B.s
ကွန်ပျူတာ (Excel နဲ့  Word) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
ရိုးသားကြိုးစားပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
လုံခြုံရေး ကျား (၁) ဦး
အသက် (၂၀)နှစ်မှ (၄၀)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
သွက်လက်ချက်ချာပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။
(၃) လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ၊
ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ အခြားပညာရေးအထောက်အထား မိတ္တူ၊
သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမိတ္တူ
No. 561/567, MAC Tower, 11th Floor Merchant Road (between Maha Bandula Park Street and 35th Street) Kyauktada Township, Yangon, Myanmar .
Email : imyanmar.hr.department@gmail.com